सडकमा भिखारी बनेर बसेका व्यक्ति यसरी स्टार भए पछि …. - Jerung Films
सडकमा भिखारी बनेर बसेका व्यक्ति यसरी स्टार भए पछि ….
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 10 Aug 2018
एजेन्सीबाट साभार,२५,साउन । ब्राजिलको सडकमा भिख मागेर गुजारा गर्ने एक व्यक्ति अचानक स्टार बने । राइमुंडो अरुडो नामका ती व्यक्ति ३५ वर्षदेखि सडक किनारमा बसेर भिख माग्थे । नजिकैको एक घरमा बस्ने महिला सधैं उनको अगाडिबाट हिँड्थिन् । एक दिन महिलाले ख्याल गरिन् कि ती भिखारी सधैं केही न केही रद्दी कागजमा लेखिरहेका हुन्थे । एक दिन महिलाले सोधिन् कि उनी दिनहुँ के लेख्छन् । त्यसपछि भने ती भिखारीको जिन्दगी नै बदलियो ।
शाला मोन्टिएरो नामकी ती महिलाले उनले के गर्छन् भनेर सोध्दा राइमुण्डो केही बोलेनन् बरु एउटा कागज दिए । महिलले जब त्यसलाई त्यसपछि बल्ल थाहा भयो त्यो निकै आकर्षक कविता थियो । शालाले बुझिन् कि यी व्यक्ति वर्षौंदेखि सडक किनारा बसेर कविता लेख्थे । शाला लगातार कैयौं दिनसम्म उनलाई भेटिरहिन् ।
हरेक पटक ती भिखारी शालालाई नयाँ कविता लेखेर दिन्थे । यसबाट प्रभावित भएर शालाले एक कविता फेसबुकमा शेयर गरिन् । त्यो कविता निकै भाइरल भयो । मानिसहरुले पत्याउनै सकेनन् कि एक भिखारी यति राम्रो कविता लेख्न सक्छन् । शालाले कविता लेखिएको कागजको फोटो खिचेर त्यो पनि शेयर गरिन् ।
शालाले राइमुण्डोको नामबाट एउटा फेसबुक पेज बनाएर जो कविता शेयर गरेकी थिइन् तिनीहरु एकदमै लोकप्रिय भए । हेर्दाहेर्दै राइमुण्डोका फ्यान बढ्न थाले । अहिले राइमुण्डोको फेसबुकमा फलोअरको संख्या २ लाख पुग्न लागेको छ । राइमुण्डो चर्चित भएपछि मानिसहरु उनलाई भेट्न जान थाले ।
उनको फेसबुक पेज बनाउने महिलाले उनलाई नुहाइदिइन्, कपाल, दाह्री काटिदिइन् । उनको नयाँ रुप देखेर उनलाई चिन्न मुस्किल थियो तर नयाँ लुकको फोटो फेसबुकमा देखेर उनका भाइले उनलाई चिने । त्यसपछि थाहा भयो कि राइमुण्डो एक व्यापारी थिए जो सैनिक तानाशाही शासनका बेला परिवारबाट बिछोडिएका थिए । त्यसपछि पैसाको अभावमा उनको यो हाल भएको थियो ।